စိတ်ကူး ထဲက နံနက် ခင်း နဲ့ တကယ့် လက်တွေ့ နံနက် ခင်း ခြားနား ပုံကို အခွီ ရိုက်ကူး ပြလိုက်တဲ့ ကိုပေါက် – Shwe Ba
Shwe MM | September 17, 2020 | Cele | No Comments
ကိုပေါက် က တော့ ဇာတ် ပို့၊ ဇာတ် ရံ တစ် ယော က်အနေ နဲ့ အနုပ ညာလောကထဲ ကို ခက်ခက်ခဲခဲ ဖြတ် သန်းလာရပြီး ပရိသတ်ရဲ့ ရင်ထဲ မှာ နေရာ တစ်နေရာ ရရှိအောင် ကြိုးစားလု ပ်ကိုင်လာခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်တ စ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါ တယ်။ လက် ရှိမှာတော့ ကိုပေါက် က မြန် မာ့ ရုပ်ရှင်လော ကကိုတစ် ထောင့်တ စ်နေရာကနေ တိုးတက်ေ အာင်လုပ်ေ ဆာင်ပေးနေတဲ့ ဇာတ်ညွန်းရေး ၊ ဒါရိုက်တာ တစ်ေ ယာက် အဖြစ် ရပ်တည်ထားနို င်ခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့ အပြင် သူရိုက် ကူးခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာ တ်ကားကြီးေ တွကလည်း ပရိသတ်တွေ သဘောကျြ ကိုက်နှစ်သက်ခဲ့ရ တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ကိုပေါက် က လက် ရှိမှာ သာဟာေ ပျာ်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ မိသား စုလေးနဲ့အတူ ဘဝကို အေးအေးချမ်းချမ်း နဲ့ ဖြတ်သန်းနေ ထိုင်နေတာဖြစ် ပါတယ် ။ လတ် တလော ကိုရိုနာဗိုင်း ရပ်တွေကြောင့် stay home အချိန်ကာ လလေးမှာလည်း ပရိသတ်တွေ တစ်နေ့တာရဲ့ အချိန် လေး တွေကို ပျော်ရွှင်မှုလေးတွေနဲ့ ဖြတ် သန်းနိုင်စေဖို့ အတွက် အပျ င်းပြေဆော့ကစား ထားတဲ့ tik tok ဗီဒီယိုလေးတွေကို အမြဲဖော်ပြ ပေး ပါ တယ်။
ယခုမှာ လည်း ကိုပေါက် က ကြည့်မိသူတိုင်း ရယ်မောပျော် ရွှင်သွားစေမယ့် ဗီဒီယိုလေးကို တင်ပေး လာခဲ့ပါတယ်။ သူရဲ့ စိတ်ကူးထဲက နံနက်ခင်း နဲ့ တကယ့်လက်တွေ့ နံနက်ခင်းရဲ့ ခြားနားပုံကို ရိုက်ကူး ထားတဲ့ ကိုပေါက်ရဲ့ ဟာသဗီဒီယိုဖိုင်လေးအပြင် ” ကျွန်တော့ရဲ့ နံနက်ခင်း များ. ” ဆိုတဲ့ စာသားလေး ကိုလည်း ရေးသားထား တာဖြစ်လို့ ချစ်ရတဲ့ ပရိသတ်တွေ ကြည့်ရှုစေနို င်ရန်အတွက် ပြန်လည်တင်ဆ က်ပေးလိုက် ပါတယ် နော်.. ။
Source;Aung Min naing
ကိုပေါကျ က တော့ ဇာတျ ပို့၊ ဇာတျ ရံ တဈျ ယော ကျအနေ နဲ့ အနုပ ညာလောကထဲ ကို ခကျခကျခဲခဲ ဖွတျ သနျးလာရပွီး ပရိသတျရဲ့ ရငျထဲ မှာ နရော တဈနရော ရရှိအောငျ ကွိုးစားလု ပျကိုငျလာခဲ့တဲ့ အနုပညာရှငျတ ဈယောကျပဲဖွဈပါ တယျ။ လကျ ရှိမှာတော့ ကိုပေါကျ က မွနျ မာ့ ရုပျရှငျလော ကကိုတဈ ထောငျ့တ ဈနရောကနေ တိုးတကျေ အာငျလုပျေ ဆာငျပေးနတေဲ့ ဇာတျညှနျးရေး ၊ ဒါရိုကျတာ တဈေ ယာကျ အဖွဈ ရပျတညျထားနို ငျခဲ့ပွီလညျးဖွဈပါတယျ။
ဒါ့ အပွငျ သူရိုကျ ကူးခဲ့တဲ့ ရုပျရှငျဇာ တျကားကွီးေ တှကလညျး ပရိသတျတှေ သဘောကြွ ကိုကျနှဈသကျခဲ့ရ တာကို တှရေ့ပါတယျ။ ကိုပေါကျ က လကျ ရှိမှာ သာဟာေ ပျြာရှငျစရာကောငျးတဲ့ မိသား စုလေးနဲ့အတူ ဘဝကို အေးအေးခမျြးခမျြး နဲ့ ဖွတျသနျးနေ ထိုငျနတောဖွဈျ ပါတယျ ။ လတျ တလော ကိုရိုနာဗိုငျး ရပျတှကွေောငျ့ stay home အခြိနျကာ လလေးမှာလညျး ပရိသတျတှေ တဈနတေ့ာရဲ့ အခြိနျ လေး တှကေို ပြျောရှငျမှုလေးတှနေဲ့ ဖွတျ သနျးနိုငျစဖေို့ အတှကျ အပြ ငျးပွဆေော့ကစား ထားတဲ့ tik tok ဗီဒီယိုလေးတှကေို အမွဲဖျောပွ ပေး ပါ တယျ။
ယခုမှာ လညျး ကိုပေါကျ က ကွညျ့မိသူတိုငျး ရယျမောပြျော ရှငျသှားစမေယျ့ ဗီဒီယိုလေးကို တငျပေး လာခဲ့ပါတယျ။ သူရဲ့ စိတျကူးထဲက နံနကျခငျး နဲ့ တကယျ့လကျတှေ့ နံနကျခငျးရဲ့ ခွားနားပုံကို ရိုကျကူး ထားတဲ့ ကိုပေါကျရဲ့ ဟာသဗီဒီယိုဖိုငျလေးအပွငျ ” ကြှနျတော့ရဲ့ နံနကျခငျး မြား. ” ဆိုတဲ့ စာသားလေး ကိုလညျး ရေးသားထား တာဖွဈလို့ ခဈြရတဲ့ ပရိသတျတှေ ကွညျ့ရှုစနေို ငျရနျအတှကျ ပွနျလညျတငျဆ ကျပေးလိုကျ ပါတယျ နျော.. ။
အမိုက်စားပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ လူငယ်ဆန်ဆန် အထာ ကျကျလေး မိမိုက်နေ တဲ့ နန်းဆုရတီစိုး
အထီး ကျန်ပြီး ညတိုင်း မျက်ရည် တွေနဲ့ ကြိတ်မှိတ် အိပ်ခဲ့ရကြောင်း ပိုပို ပြောပြလာ